Dhinaca Wabiga Mississippi oo adkaysi badan
Tixraacyada Ku dhawaad 30 Sano oo Maalgalinta
Agaasimayaasha hay'adda 'McKnight Foundation' agaasimaheeda waxay joogteyn heer sare ah, ku dhawaad 30 sano u heellan tahay ilaalinta webiga Mississippi iyo Gacanka Mexico. Ballan qaadkaasi wuxuu ahaa aqoonsi taariikhda wabiga aan caadiga ahayn iyada oo diiradda la saaray bulshada, dhaqanka, wax soo saarka cunnada, iyo gaadiidyada kumanaanka sano. Webiga wuxuu ahaa, welina sii ahaanayaa, mid qaddarin badan.
“Waxaan uga mahadcelineynaa guddiga McKnight 30 sano ku dhawaad taageerada ilaalinta dhowrista wabiga, waxaana si qoto dheer uga mahadcelineynaa kalgacalka iyo balanqaadka boqolaalka shaqsiyaadka iyo ururada ee iskaashigooda la sameeyay McKnight si loo wanaajiyo carrada Midwest iyo biyaha, Wabiga Mississippi, iyo Gacanka Mexico. ” –KA MULLER, MISSISSIPPI BARNAAMIJKA RIVER EE DUGSIGA
Iyada oo qayb ka ah geeddi-socodkaas, guddiga ayaa dhowaan go'aansaday inuu qorrax u dhacayo barnaamijka wabiga Mississippi; Nofeembar waxay astaan u noqon doontaa barnaamijkii ugu dambeeyay ee deeqaha cusub. Bilaha soo socda, shaqaalaha McKnight waxay bixin doonaan deeq kordhin iyo fududeynta kala-guurka deeq-bixiyeyaasha. Waxaan sidoo kale ku tala jirnaa inaan u dabaaldegno ku dhawaad 30 sano oo guulo aan caadi aheyn ay gaareen deeq bixiyeyaal iyo la-hawlgalayaal, iyo inaan u mahadcelinno iskaashiga badan ee muddada dheer soo jiray.
Beeraha Mississippi iyo Beeraha Midwest waxay ku sugan yihiin meel aad uga duwan 30 sano ka hor.
Julia, Sarah, iyo waxaan sugeynaa inaan la shaqeyno deeq bixiyaasha iyo la-hawlgalayaasha si aan ugu fududaato kala-guurka ugu macquulsan intii suurtagal ah. Waxaan uga mahadcelineynaa guddiga McKnight 30 sano ku dhawaad taageerada ilaalinta dhowrista wabiga, waxaana si qoto dheer uga mahadcelineynaa kalgacalka iyo balanqaadka boqolaalka shaqsiyaadka iyo ururada ee iskaashigooda la sameeyay McKnight si loo wanaajiyo carrada Midwest iyo biyaha, Webiga Mississippi, iyo Gacanka Mexico.
Star Tribune | Dalagyada caanaha ah ayaa badbaadin kara cabitaanka biyaha ee reer miyiga ah, ayuu yidhi U
America's Most Endangered Rivers® ee 2019
Warbixinta Abriil 2019